Buzzer Beat ( 2009 ) - Myanmar Asian TV
ဒီကားလေးကိုတော့ အနည်းအကျဉ်းတော့ မှတ်မိကြမှာပါနော် …
ငယ်ငယ်တုန်းက F4 ချစ်သူ တို့ A.N.GELL ချစ်သူ တို့နဲ့ အပြိုင် အခွေဆိုင်မှာ တင်ထားတာ တွေ့လို့ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာ … အဲ့တုန်းက ရုပ်ကလဲ ဝါး … စာတန်းကလဲ ထိုးတဝက် မထိုးတဝက်ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ feel သိပ် မလာခဲ့ဘူး …
အဲ့ဒါနဲ့ ဂျပန်စာ လေ့လာသင်ကြားနေတဲ့ translator sis Ei Phyu Sin Htun ကို သူ့အတွက်လဲ အထောက်အကူဖြစ်အောင် ဂျပန်ကားလေးတွေ လိုက်ရှာပေးရင်း ဒီကားလေးကို သတိရမိသွားတာပါ … သူလဲ ကြည့်ဖူးတယ် , ကြိုက်တယ် , ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုလို့ နောက်ဆုံး အခု တင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ ?? …
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကတော့ အရမ်းကြီး မိတ်ဆက်စရာမလိုပါဘူး …
နာအိုကီ ဆိုတဲ့ basketball player ကောင်လေး နဲ့ ရီကို ဆိုတဲ့ violinist ကောင်မလေး တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ …
သူတို့နှစ်ယောက် တယောက် နဲ့ တယောက် ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး တယောက် ပရိသတ် တယောက်လုပ်ရာမှ သံယောဇဉ်တွယ်သွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့ …
ကိုယ်စီ ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကို အခက်အခဲတွေ ကြားမှာ လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားကြရပုံကို Drama , Romance , Comedy လေး နဲ့ ဖွဲ့နွဲ့ပြီး ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် …
ရီကို အဖြစ် Keiko Kitagawa တို့က Main Cast တွေ အနေဖြင့် ပါဝင်ထားပါတယ် …
MyDramaList မှာ 8/10 အသီးသီး ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် …
အပိုင်းအားလုံးပေါင်း ၁၁ ပိုင်း ပါရှိ ပါတယ် ….
Translator : Ei Phyu Sin Htun
Starring: Aya Omasa, Ayaka Komatsu, Hideaki Ito, Junpei Mizobata, Kato Keisuke, Keiko Kitagawa, Masaru Nagai, Miki Maya, Munetaka Aoki, Nobuaki Kaneko, Saki Aibu, Shigemitsu Ogi, Shihori Kanjiya, Tomohisa Yamashita, Yasuyuki Maekawa,